आइतबार जुन 6, 2021 |
आइतबार जुन 6, 2021
विषय — भगवान एक मात्र कारण र सृष्टिकर्ता
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 139 : 14
“"हे परमप्रभु, म तपाईंको प्रशंसा गर्छु। तपाईंले मलाई आश्चर्यपूर्वक र अपूर्व प्रकारले बनाउनु भयो। म खुब जान्दछु कि जे तपाईंले गर्नुभयो, आश्चयपूर्ण छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: यशैया 61 : 10, 11	•	यर्मिया 32: 18, 19
10 परमप्रभुले मलाई अत्यन्त खुशी पार्नुभयो। म सम्पूर्णमा परमेश्वरमा खुशी मनाउँनेछु। परमेश्वरले उद्धारको पोषाक मलाई लगाइदिनुभयो। ती पोषाकहरू अत्यन्तै सुन्दर छन् जुन विवाहको उपलक्ष्यमा मानिसहरू लगाउँछन्। परमप्रभुले धार्मिकताको पोषक मलाई लगाई दिनुभयो त्यो पोषक स्त्रीहरूले विवाहमा लगाउने जस्तो सुन्दर छ।
11 पृथ्वीले नै बिरूवा उर्माछ। मानिसहरूले त्यसको बीऊ बगैंचामा रोप्दछन्, अनि बगैंचाले त्यसलाई उमार्छ फलाउँछ। त्यसरी नै परमप्रभुले धार्मिकता उमार्नु हुन्छ। परमप्रभुले प्रत्येक जातिबाट महिमा लानुहुन्छ।
18 हे परमप्रभु, तपाईं हजारौं मानिसहरूका लागि कृपालु हुनुहुन्छ तर तपाईंले पिता-पुर्खाहरूको पापको भागी नानीहरूलाई दण्ड दिनुभयो। हे महान एवं शक्तिशाली परमेश्वर, तपाईंको नाउँ सेनाहरूका परमप्रभु हो।
19 तपाईंको विचार महान छ अनि महान कर्महरू गर्नुहुन्छ। हे परमप्रभु! तपाईंले मानिसहरूले जे गर्छन् हेर्नु हुन्छ अनि तिनीहरूको कर्म अनुसार फल दिनुहुन्छ।
1. उत्पत्ति 1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (से;), 16, 18, 21, 24-26 (से:), 27, 30, 31 (से 1st .)
3 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्! अनि उज्यालो चम्कन थाल्यो।
4 परमेश्वरले उज्यालो देख्नु भयो अनि त्यसलाई असल मान्नु भयो। तब परमेश्वरले उज्यालो र अँध्यारोलाई छुट्याउनु भयो।
10 त्यो सुख्खा भूमिलाई परमेश्वरले पृथ्वी नाउँ राख्नु भयो। अनि एकै ठाउँमा जम्मा भएको पानीलाई समुद्र नाउँ राख्नु भयो। परमेश्वरलाई यस्तो भएकोमा असल लाग्यो।
12 पृथ्वीमा घाँस र उद्भिदहरू उम्रे अनि अन्नहरू फले। अनि पृथ्वीमा फलभित्र बीउहरु हुने फल फल्ने रुखहरु उम्रिए। प्रत्येक उद्भिदले आफ्नै प्रकारको बीउहरु सिर्जना गरे। अनि परमेश्वरले यिनलाई देखेर असल मान्नु भयो।
14 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाशमा उज्यालो होस्। यी उज्यालाहरुले दिनहरुबाट रातहरुलाई छुट्‌याउनेछन्। यो उज्यालाहरुलाई विशेष चिन्हहरुको निम्ति प्रयोग गरिनेछन् र यिनीहरुले सभाहरु कहिले हुने बताउनेछन्। अनि यिनीहरुलाई दिनहरु र वर्षहरु बताउनमा प्रयोग गरिनेछ।
16 यसर्थ परमेश्वरले दुईवटा ठूला-ठूला प्रकाश पुञ्जहरु निर्माण गर्नुभयो। दिनमा प्रयोग गर्नको निम्ति परमेश्वरले ठूलो प्रकाश-पुञ्ज बनाउनु भयो अनि रातको निम्ति सानो प्रकाश-पुञ्ज बनाउनु भयो। परमेश्वरले ताराहरु पनि सृष्टि गर्नु भयो।
18 यसकारण उहाँले तिनीहरुलाई आकाशमा दिन र रातमाथि शासन गाराउनु भयो। यी प्रकाश पुञ्जहरुले अँध्यारोबाट उज्यालो छुट्याए अनि परमेश्वरलाई यो असल लाग्यो।
21 यसर्थ परमेश्वरले सामुद्रिक ठूला-ठूला प्राणीहरु र पानीमा पौडिने विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरु सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आकाशमा उड्ने जाति-जातिका प्राणीहरु सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वीमा जलचर र थलचर विभिन्न प्रकारका प्राणीहरु परमेश्वरले सृष्टि गरी हेर्नु भयो र ती सबै असल लाग्यो।
24 परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथवीले धेरै प्रकारका जीवित चीजहरु बनाओस्। त्यहाँ घरेलु पशुहरु, घस्त्रने जन्तुहरु अनि सबै प्रकारको जङ्गली जनावरहरु रहोस्। अनि परमेश्वरले इच्छा गर्नु भएझैं नै यी सबै भए।
25 यसर्थ परमेश्वरले जङ्गली जनावरहरु, पाल्तू जनावर, सा-साना घस्रने जनावर विभिन्न प्रकारका प्राणीहरु सृष्टि गरेर हेर्दा उहाँलाई राम्रो लाग्यो।
26 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी मानिस सृष्टि गरौं। हामी मानिस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र मानिस हामी जस्तै हुनेछन्। तिनीहरुले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अनि घस्रने सबै प्राणीहरुमाथि शासन गर्नैछन्।
27 यसर्थ परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरुपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नु भयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृष्टि गर्नुभयो।
30 म फेरि पशुहरुलाई खानका निम्ति हरियो घाँस तथा उद्भिद दिनेछु र पृथ्वीमा भएका प्रत्येक सा-साना घस्रने प्राणीहरु, आकाशमा उड्ने चराहरु अनि पृथ्वीका सबै जनावरहरुले, यी चीजहरु खानेछन्। अनि यस्तै भयो।
2. यशैया 11 : 1, 10
1 यस्सीको ठुटाबाट एउटा सानो रूख उम्रनेछ। यस्सीको जराहरूबाट त्यसको हाँगा बढने छ।
10 त्यसबेला, यस्सी वंशबाट एउटा विशेष मानिस आउनेछ। त्यो मानिस झण्डा जस्तो हुनेछ। त्यस झण्डा सारा जातिहरूलाई के देखाउँछ र भन्नेछ उहाँको वरिपरि तिनीहरू सबै आउनु पर्दछ। ती जातिहरू के गर्नु पर्ने भनेर उनलाई सोध्नेछन्। अनि जुन ठाउँमा उनी हुने छन् त्यो ठाउँ महिमाले भरिपूर्ण हुनेछ।
3. लूका4: 1 (र येशू) मात्र, 17 (ठाउँ भेटियो), 18
1 र येशू...
17 ...अनि एक ठाउँ जहाँ निम्नलिखित कुरा लेखिएको भेट्टाउनु भयोः
18 परमप्रभुको आत्मा ममथि छ। परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभएकोछ, केही पनि नभएका मानिसहरूमा सुसमाचारहरू सुनाउनलाई परमेश्वरले मलाई घोषणा गर्नु पठाउनु भएकोछ, कैदीहरूलाई मुक्त पार्न अनि अन्धो मानिसहरूलाई देख्न सक्ने पार्न अनेकौं यातनामा पिल्सिएका मानिसहरूलाई मुक्त पार्न परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएकोछ।
4. मत्ती4: 23, 24
5. मत्ती9: 18-25
18 येशू यी कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैबला सभाधरको एकजना प्रमुख उहाँकहाँ आए। येशूको अघि तिनले शिर झुकाए, अनि भने, ‘मेरी छोरी अहिले मरी कृपया आउनुहोस् र तपाईंको हात त्यसमाथि राखिदिनुहोस् अनि त्यसले आफ्नो जीवन फिर्ता पाउनेछ।
19 तुरन्तै यशू उठनु भयो अनि तिनीसित जानुभयो। उहाँका चेलाहरू पनि पछि लागे।
20 बाह्र र्वषदेखि रगत बहने रोगले ग्रस्त एउटी स्त्री त्यहाँ थिईना। येशूको पछिल्तिर आएर उनले उहाँको वस्त्रको फेरमा छोइन्।
21 तिनले सोच्दै थिइन्, “यदि मैले उहाँको लुगाको फेरमा छोएँ मात्र भने पनि म ठीक भइजानेछु।
22 येशू पछिल्तिर र्फकिनु भयो र तिनलाई देखेर भन्नुभयो, हे प्यारी छोरी खुशी होऊ। तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएकि छौ। त्यतिनै बेला तिनी ठीक भइन्।
23 येशू यहुदी शासकसँग हिंडदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ तिनको घरमा पुग्नुभयो। उहाँले मानिसहरूलाई शोक धुन बजाइरहेको देख्नुभयो। उहाँले धेरै मानिसहरूलाई त्यहाँ रोइरहेको देख्नुभयो किनभने युवती मरेकी थिई।
24 येशूले भन्नुभयो, पर जाऊ। यो युवती मरेकी छैन। ऊ निदाइरहेकी मात्र छे। यो देखेर मानिसहरूले उहाँको हाँसो उडाए।
25 जब मानिसहरूलाई घरबाट बाहिर पठाइयो, तब येशू युवतीको कोठामा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले युवतीको हात समात्नुभयो अनि त्यो युवती जुरुक्क उठी।
6.2कोरिन्थी4: 6, 8, 9, 16-18
6 परमेश्वरले एक पल्ट भन्नु भएको थियो, अन्धकारबाट ज्योति चम्कने छ! अनि उहाँ तिनै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृदयमा आफ्नो ज्योति प्रकाशित हुन दिनुभयो। ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्वरको महिमा झल्काएर उहाँले हामीलाई प्रकाश दिनु भयो।
9 हामी सताइरहेका छौं तर परमेश्वरले हामीलाई छोडनु हुन्न। कहिले कहीं हाम्रो चित्त दुखाइन्छ तर हामी नष्ट गरिएका छैनौं।
16 त्यसैकारणले हामी कहिल्यै कमजोर बन्दैनौं। हाम्रो भौतिक शरीर जीर्ण र कमजोर हुँदैछ तर हामीभित्रको आत्मा हरेक दिन नयाँ बनिदैछ।
18 त्यसैले हामीले देख्ने नसकिने कुराहरू हामी सोच्छौं तर जे देख्छौं ती विषयमा होइन। प्रत्यक्ष देखिने कुराहरू क्षणिक हुन्छन् अनि हामीले देख्न नसकिने कुराहरू चाँहि सँधैको लागि हुनेछ। ﻿
7. मत्ती5: 48
महान शिक्षक दुबै कारण र प्रभाव जान्दछन्, जान्दछन् कि सत्य आफैं संचार हुन्छ तर कहिले त्रुटि प्रदान गर्दैन।
उत्पत्ति 1. 31. परमेश्वरले आफूले सृष्टि गरेका प्रत्येक चीजको निरीक्षण गर्नु भयो अनि सबै असल लाग्यो।त्यहाँ साँझ पर्यो र फेरि अर्को बिहान भयो। यो छैटौं दिन थियो।
ईश्वरीय सिद्धान्त, वा आत्मा, सबै बुझ्छ र अभिव्यक्त गर्दछ, र त्यसैले सबै ईश्वरीय सिद्धान्त पूर्ण छ को रूप मा पूर्ण हुनुपर्दछ। आत्मामा कुनै कुरा नयाँ छैन। कुनै चीज अनन्त मनको लागि उपन्यास हुन सक्दैन, सबै चीजहरूका लेखक, जसले सदासर्व कालदेखि आफ्ना विचारहरू जान्दछन्। देवता आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट थिए। उहाँ कसरी हुन सक्नुहुन्थ्यो, किनकि आत्मिक सृष्टि उहाँको असीम आत्म-संयम र अमर बुद्धिको फैलिएको, उत्पत्ति थियो।
3. 472 : 24 (सबै)-30
सबै वास्तविकता परमेश्वर र उहाँको सृष्टिमा छ, सामञ्जस्यपूर्ण र अनन्त। उहाँ जे सृजानुहुन्छ त्यो उत्तम छ, र सबै कुरा बनाउनुहुन्छ। तसर्थ, पाप, बिमारी वा मृत्युको एकमात्र वास्तविकता भनेको यो सत्य हो कि असत्यता वास्तविकतामा देखिन्छ, गम्भीर विश्वास हो, जबसम्म परमेश्वरले उनीहरूको भेष हटाउनुहुन्न। तिनीहरू सत्य होइनन् किनभने तिनीहरू परमेश्वरका होइनन्।
परमेश्वरको विचारहरू सिद्ध र अनन्त छन्, पदार्थ र जीवन हुन्। भौतिक र अस्थायी विचारहरू मानव हुन्, त्रुटि समावेश छन्, र किनकि परमेश्वर, आत्मा, एक मात्र कारण हो, तिनीहरूसँग ईश्वरीय कारण छैन। लौकिक र भौतिक आत्माको सृष्टि होईन। तिनीहरू आत्मिक र अनन्तको मात्र हुन्।
नराम्रा दिमाग मानव अभिप्रायहरूको स्वीकृत सीट हो। यसले भौतिक अवधारणाको गठन गर्दछ र शरीरको प्रत्येक विवादास्पद कार्य उत्पन्न गर्दछ। यदि कार्य दिव्य दिमागबाट अगाडि बढ्छ भने, कार्य सामञ्जस्यपूर्ण छ। यदि यो गम्भीर मनबाट गल्तीबाट आएको हो भने यो विवादास्पद हो र पाप, रोग, मृत्युमा समाप्त हुन्छ। ती दुई विपरित स्रोतहरू फोउना वा स्ट्रिममा कहिले सम्मिलित हुँदैनन्। उत्तम दिमागले पूर्णता पठाउछ, किनकि परमेश्वर दिमाग हुनुहुन्छ। असिद्ध नश्वर दिमागले आफ्नो समानताहरू पठाउँदछ, जसमा बुद्धिमान् व्यक्तिले भने, "सबै व्यर्थ हो।"
सत्यमा त्रुटिको चेतना हुँदैन। प्रेममा घृणाको भावना हुँदैन। जीवनको मृत्युसँग कुनै साझेदारी छैन। सत्य, जीवन, र प्रेम आफैंले विपरित सबै कुराको लागि विनाशको एक कानून हो किनभने तिनीहरूले परमेश्वर बाहेक अरू केहि घोषणा गर्दैनन्।
रोग, पाप र मृत्यु जीवनको फल होइन। ती असंगति हो जसले सत्यलाई नष्ट गर्दछ। पूर्णताले अपूर्णतालाई सजीव पार्दैन। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ र सबै प्राणीहरूको पक्षमा पनि, उहाँ नैतिक वा शारीरिक विकृति उत्पन्न गर्नुहुन्न; त्यसैले यस्तो विकृति वास्तविक छैन, तर भ्रम हो, त्रुटिको मिरज। ईश्वरीय विज्ञानले यी महान् तथ्यहरू प्रकट गर्दछ। तिनीहरूको आधारमा येशूले जीवन प्रदर्शन गर्नुभयो, कुनै पनि रूपमा कुनै डरको डर नमानी र आज्ञाकारी हुनुहुन्न।
यदि हामीले मानिसका सबै धारणाहरू पालैपालो र चिहानको बीचमा देखेको हो भने, सुख र भलाइको कुनै स्थायी स्थान हुँदैन, र गँड्यौलाहरूले उसलाई शरीरबाट लुट्छ; तर पावल लेख्छन्: "किनभने ख्रीष्ट येशूमा, जीवनदाता आत्माको विधान जसले जीवन ल्याँउछ त्यसले मलाई मुक्ती दियो। त्यो विधान जसबाट पाप र मृत्यु आउँछ त्यसबाट पनि मलाई मुक्ति दियो।"
मानिस जन्म, परिपक्वता, र क्षयबाट गुज्रिरहेको जनावरहरू र तरकारीहरू जस्तै छ, - क्षय कानूनको अधीनमा। यदि मानिस आफ्नो अस्तित्वको प्रारम्भिक चरणमा माटो थियो भने, हामी यो परिकल्पनालाई स्वीकार गर्न सक्छौं कि अन्ततः ऊ आफ्नो पुरानो अवस्थामा फर्कन्छ; तर मानिस मानिस भन्दा पहिले कहिले कम थिएन।
यसको विज्ञानमा रहेको वास्तविकता र क्रम बुझ्न, तपाईंले भगवानलाई वास्तवमै सबैको ईश्वरीय सिद्धान्त मान्नु पर्छ। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एकको रूपमा जोड्नुहोस्, - र भगवानको लागि धर्मशास्त्रीय नामहरू हुन्। सबै पदार्थ, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, अस्तित्व, अमरत्व, कारण र प्रभाव ईश्वरको हो। यी उहाँका विशेषताहरू हुन्, अनन्त दिव्य सिद्धान्त, प्रेमको अनन्त अभिव्यक्ति। कुनै बुद्धि छैन बुद्धिमानी छ तर उहाँको बुद्धिले मात्र; कुनै सत्य सत्य छैन, प्रेम मायालु छैन, जीवन जीवन होइन तर ईश्वरीय छ; कुनै लाभ हुँदैन, तर असल भगवानले अनुग्रह गर्नुहुन्छ।
यसमा जीवन छ र यो पाप, बिरामी र मृत्यु परमेश्वरको सृष्टि हो भनेर विश्वास गर्ने गल्तीलाई कहिले हटाउन सकिन्छ? यो कहिले बुझिनेछ कि पदार्थसँग न त बौद्धिक, जीवन, वा संवेदना छ, र विपरित विश्वास सबै दुःखकष्टको प्रबल स्रोत हो?
त्यहाँ एक मात्र मुख्य कारण छ। त्यसकारण कुनै अन्य कारणबाट कुनै प्रभाव हुन सक्दैन, र त्यहाँ कुनै वास्तविकता हुन सक्दैन जुन यो महान र एकमात्र कारणबाट अगाडि बढ्दैन। पाप, बिमारी, रोग, र मृत्यु अस्तित्वको विज्ञानसँग सम्बन्धित छैन। ती त्रुटिहरू हुन्, जसले सत्य, जीवन, वा प्रेमको अनुपस्थितिलाई अनुमान गर्दछ।
विज्ञानको अस्तित्वमा भएको महान् सत्य, कि वास्तविक मानिस थियो, र सदा सिद्ध हुनेछ, अकल्पनीय छ; किनकि यदि मानिस परमेश्वरको प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, हो भने, ऊ न त उल्टो हुन्छ न त उल्टो नै हुन्छ, तर सीधा र ईश्वर जस्तो हुन्छ।
यदि भगवान एक मात्र दिमाग र जीवनको रूपमा स्वीकारिएको छ भने, त्यहाँ पाप र मृत्युको लागि कुनै अवसर रहन्छ। जब हामी विज्ञानमा सिक्छौं कि कसरी स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो पिता सिद्ध छ, सोच्न नयाँ र स्वस्थ माध्यमहरुमा परिणत हुन्छ - अमर र भौतिकताबाट टाढा सामन्ती मानिस सहितको चिन्तनको लागि।
येशूले विज्ञानमा एक सिद्ध मानिस देख्नुभयो, जो उहाँ कहाँ देखा पर्नुभयो जहाँ पापी मानिस मर्दछ। यस सिद्ध मानिसमा मुक्तिदाताले परमेश्वरको आफ्नै समानता देख्नुभयो, र मानिसप्रति यो सही दृष्टिकोणले बिरामीहरूलाई निको पारे। त्यसकारण येशूले सिकाउनुभयो कि परमेश्वरको राज्य अखण्ड, विश्वव्यापी छ, र त्यो मानिस शुद्ध र पवित्र छ।
भगवान्ले दिमागको माध्यमबाट सबै सृष्टि गर्नुभयो, र सबै सिद्ध र अनन्त बनाउनुभयो।